Jacayl kii Koobaad
Jacaylkii Koobaad – Cutubka Labaad- Qaybta 21aad
April 7, 2019 qawdhan
Sagal waxay kusoo lebisatay dhar cad Ayaana dhar cas.
Markay hablihii soo gaadheen miiskii Timo iyo C/risaaq, ayay labadii nin u istaageen. Bariido gacanta ah ayaa la is weydaarsaday iyadoo la dhoola cadeynayana waa la fadhiistay miiskii.
Waa isla miiskii uu fadhiyey C/risaaq maalintii uu arkay Sagal.
Axmed Timo ayaa markiiba fududeeyey in sheekadu bilaabanto isagoo inyar oo dacaayad ah ku ganay C/risaaq.
Timo isagoo la hadlaya Sagal ayuu ku yidhi “Ninkan waan hayn kari la’aa habeenadanba ee inanka caawa bal ka dhegayso”
Si aan laga filayn, oo kalsooni ku jirto, indhaheeduna khaakhaayirayaan intay u eegtay C/risaaq ayay weydiisay “Ma runbaa?”
C/risaaq oo yara khajilsan dhinacna raba inuu hadalka helo, balse indhaheeda ujeedada ifayaa hadalkuu soo waday ilowsiiyeen ayaa haleelay oo si yara naxsan ugu jawaabay “ Haa ee iga dhegayso”
Sagal: Haye soo daa..bilow bal
C/risaaq ileyn waa nin Axmed Timo wax ka yara bartaye, wuxuu si kalsooni ah u furay ujeedadiisii waxaanu si kaftan ah ugu yidhi “Haye ina keen soo yara mijo baxsanee”
Sagal: Miyaad xishoonaysaa? 😀
C/risaaq: Mayee laydh macaan baa jirta.
Sagal runtii way la garawsatay in habeenku yahay habeen qurux badan. Gudcur ah, cirkana aanu caad saarnayn. Si saafi ahna xidiguhu u muuqdaan. Inkasta oonay filaynin codsigiisa hadana waxay qudheedu jeclaysatay in ay soo yara dhex marto beerta quruxda badan ee ku taal Time & Space.
Ayaan iyo Timo oo iyagu aan ahayn dad kala qaloonaya una aamusay labadan laafyoodka raba ayaa ugu dartay “ iska soo soc-socda meeshan cashadeedu way raagtaaye”
C/risaaq oo Ayaan abaal uga haya siday ugala shaqaysay kulankan suurtagalintiisa ayaa u celiyey “Soo maaha Ayaan?”
C/risaaq iyo Sagal waxay cabbaar iyagoon wax hadal ah is weydaarsan dhex tax-taxaasheen beertii Time and Space. Udgoonka dhirta beerta iyo neecawda fiidka Hargeysa ayaa jawiga laafyoodkooda ka dhigay mid saxan.
Kolba isha ayuu ku yara qabtaa Sagal, iyaduna daymadiisa way iska indho tirtaa. Waxoogay markuu ka jeesan waayay ayay markii dambe hadalka u bilowday.
Sagal: Haye ii sheeg dee
C/risaaq: Qayb aniga iga mid ah, oo aanan ogeyn inay igu jirto ayaa maalintaan ku arkay illaa maanta igu kaa wareerisay.
Sagal way qososhay, qosol yar markii hore, illaa ay is hayn kari weyday oo ay afka is qabatay si aan loo maqal.
Sagal: Imisa qaybood ayaad leedahay?
C/risaaq: Dee hada laba qaybood. Qaybtan ku rabta ee igu cusub iyo qaybtaydii hore een weligay aqaanay.
Sagal: Maxay ku kala duwan yihiin qaybahaagu?
C/risaaq: Aad bay u kala duwan yihiin, weliba markasta way is haystaan, waxase jirta dhib ah in qaybta dhawaan toostay adigana aadka kaaga fikirta ay hadaanay helin waxay rabto, ama siday rabto aanan u yeelin ay dhadhanka nolosha iga joojinaysoba.
Sagal waxa ka yaabiyey sida uu wax sharaxo. Way sii jeclaysanayaysay sheekadiisa waanay sii fahmaysay dabeecadiisa marba marka ka dambeysa.
Sagal: Malaa waxaad kala garan la’adahay nafta iyo caqliga
C/risaaq: Maya, naftayda iyo dabeecadaheeda awalba waan aqaanay, balse qaybtan cusub nafta iyo caqligaba waxaanan ku aqoon ayay iga soo saartay.
Sagal: Wax noocee ah?
C/risaaq: Waxaad moodaa in aan yeesho awood dheeraad ah. Balse awoodaasi waa mid aan adiga uun kaaga fikiro ama qorshayaal kuu samaysto.
Sagal iyo C/risaaqba si wadajir ah ayay u qosleen.
Waxa is bedelay jawigii, waxaana cirku yeeshay darruur iyo neecaw roobeed.
Sagal: Qorsheyaal noocee ah ayaad ka fikirtaa?
C/risaaq: Badanaa waa sidaan kuula kulmi lahaa uun qorsheyaal ku saabsan.
Sagal: Imika waad ila kulantee, whats next?
C/risaaq: Aynu is barano
Sagal: What do you want to know?
Roob ayaa soo tiixay, waxaanay isku afgarteen inay ku noqdaan miiskoodii. Illeyn sheekadaa la macaanatee, wakhti ku dhaw labaatan daqiiqadood ayay ka maqnaayeen miiskoodii.
Waxay usoo noqdeen Ayaan iyo Timo oo aad u qoslaya cuntadiina sii bilaabayba.
Habeenku waxa uu ugu hagaagay si aanu marnaba filan C/risaaq. Gabadhii uu jeclaa, jawi macaan, cunto macaan, macalinkiisii iyo saaxiibkiisii iyo sheeko kaftana ayuu isla helay.
Previous Post Isbedelada Geeska Ka Socda – Aragti Kooban
Next Post Sirta Horumarka – Guud Mar
UpduL wahiT says:
Wise man proh zheekadan maad buuG kazO zaarin
Haa saaxiib ma iibsan lahayd buugaas?
Wise man abti meeday sheekada qaybteedii 22aad
Dhawaan filo bro